8. Haweenayda Hadalka Badan: Tani waa haweenayda ugu dambaysa ee siddeedaad ee nooceeda oo kale ragga looga digayo in ay nolol la wadaagaan. Waa haweenayda hadalka badan ee afar iyo labaatanka saacadoodba dhurmaysa wax ay ka sheekaynaysana aan la garanayn. Waxa ay gurigeeda iyo baylahdeeda ka door biddaa in ay qabsato wareeg iyo sheeko dumar. Mar walba waxa ay waddaa hadal aan macno lahayn iyo sheeko dheer. Hadal badnaan badan ayay ku caan tahay waxaanay saacadaad aragtaba ku guda jirtaa hadal badan iyo sheeko aan xad lahayn. Haween badani waxa ay leeyihiin caadadan waxaana la isugu tilmaamaa heblaayo waa mid hadal badan.
Haweenayda hadalka badan waxa la ogaaday in aanay maskax ahaan dhammayn. Waxa kale oo hadalka badani saamyn ku leeyahay waxqabadkeedii qoysnimo waana haweenay mudayac ah inta badan. Reerkeedii oo baylahsan ayay sheeko haween ku jirtaa. Wakhti ay soo shirinayso iyo wakhti ay u wareegayso reer xaqanaas. Waligaa ha u dhawaan haweenayda hadalka badan. Dhaqan ahaan dadyowga dunida ku nooli waxa ay ku kala duwan yihiin dhinaca hadal badnaanta. Daraasad arrintan laga sameeyey waxa lagu ogaaday in dadka dunidu necebyihiinhadalka badan.